Daawo muuqaalka: gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya oo si cajiib badan ugu dhawaaqaya fashilkii mowshinka |
Daawo muuqaalka: gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya oo si cajiib badan ugu dhawaaqaya fashilkii mowshinka
Afhayeenka baarlamaanka Soomaaliya, maxamad Ismaan Jawaari ayaa maanta si cajaa ib badan ugu dhawaaqay fashilaadii soo wajahday xildhibaanadii waji gabaxa kala kulmay mowshinkii xukuumada lagu maja xaabin lahaa.
Kadib kulan xildhibaanada Soomaaliyeed ay ku yeesheen Muqdisho ayaa xildhibaanadani mowshinka dib ula laabtay waxa ay ku sheegeen bedelida go’aankooda mid kamid ah xalka lagu doonayo in Soomaaliya horay ugu socoto soo kabashada.
Inkasta oo xildhibanadaani ay sheegeen in ay ka laabteen mowshinka ayaa hada waxaa marag madoonta ah in ka laabashadooda ay aheyd mid ku timid diblamaasiyad aad u cajiib badan oo madaxda dowladu la isticmaashay xildhibaada ayna ku guuleesteen in ay gaarsiiyaan heer ay ka yaraadaan xildhibaanadu kuwa aan awood u leh dhaqaajinta mowshinka.
Gudoomiyaha Baarlamaanka Soomaaliyeed, Maxamed Cusmaan Jawaari oo shir gudoominayay kulankii maanta ayaa waxa uu ka dhawaajiyay in uu guul dareestay mowshinkaasi kadib markii xildhibaandii soo gudbiyay oo ahaa 93 mudane midba mar uu ka tanaasulay sidaa darteed xukuumadu ay sii shaqeyn doonto.
Si kastaba, waa markii ugu horeysay taariikhda dhaw xildhibaano ay la laabtaan mowshin ka dhan aha xukuumad, waxaana dadka ka falanqooda arimaha nuucaan oo kale ay ay sheegayaan in aysan quusan xildhibaanda guul dareestay ayna doonaaan in mar kale ay dib u soo laba kacleeyaan ayna miiska soo saaran mowshinka iyaga oo doonaya in ay la fiirsadaan xilli ay taagantahay kala qeyb-sanaan xagga siyaasada ah.